Social Media Pundits သည် Corporate Social Media ကိုဖျက်ဆီးနေသည် Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, ဖေဖော်ဝါရီလ 8, 2015 ကြာသပတေးနေ့, ဇွန်လ 18, 2015 Douglas Karr
ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာအမှားလုပ်မိဖူးလား။ ငါအတော်လေးအနည်းငယ်လုပ် (နှင့်သူတို့ကိုအောင်ဆက်လက်) ။ မကြီးမားသောအမှားအယွင်းများ, ဒါပေမယ့်နည်းနည်းအမှားအယွင်းများ။ ငါရှောင်ရှားနိုင်ကြောင်းအာရုံမခံစားနိုင်သောမှတ်ချက်တွေလုပ်ပြီးပြီ။ ငါလေးစားခံရတဲ့လူတွေကိုပြစ်တင်ဝေဖန်တယ်၊ ငါနိုင်ငံရေးဝေမျှသည် - ဆိုရှယ်မီဒီယာမှားယွင်းမှုများ၏သန့်ရှင်းသော grail ကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်များတွင်စီးပွားရေးနှင့်ပျော်မွေ့မှုကိုရောထွေးသည်။
မင်းထင်လိမ့်မယ် ... ဒါပေမယ့်ငါဟာနေ့တိုင်းကျန်းမာတဲ့ချစ်သူ၊ သူငယ်ချင်းအသစ်တွေနဲ့စီးပွားရေးပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုတွေရှိခဲ့တယ်။ အတိုင်ပင်ခံတစ် ဦး လျှင်, ငါပါ အရာအားလုံးမှားယွင်းနေသည်... ဒါပေမယ့်အလုပ်လုပ်နေတယ် ထိုအပင်လူစိမ်း, သောမဟာဗျူဟာများ DK New Media ကုမ္ပဏီများအတွက်တပ်ဖြန့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်အပြုသဘောပြန်လာဖန်တီးနေကြသည်။ အချို့သောလူမှုမီဒီယာအတိုင်ပင်ခံများရှောင်ကြဉ်သောအရာ။
ငါအကြောင်းကိုမတိုင်မီရေးသားခဲ့သည် စစ်မှန်နှိုင်းယှဉ်င့်လင်းမြင်သာမှု ဒါကြောင့်မြင်းသေကောင်ကိုငါမရိုက်ဘူး (uh-oh … PETA ကိုမခေါ်ပါနဲ့) ။ ဆိုရှယ်မီဒီယာအတိုင်ပင်ခံတစ်ယောက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမရည်ရွယ်ဘဲအမှားကျူးလွန်မိတာကိုကုမ္ပဏီတခုမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တာကိုတွေ့တော့ငါအရမ်းစိတ်ဆိုးတယ်။
နောက်ဆုံးအားနည်းချက်မှာ Coca-Cola ဖြစ်သည်။ သူတို့အတွက်တွစ်တာဘော့တစ်ခုကိုသူတို့ဖန်တီးခဲ့ကြသည် #MakeItHappy စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၊ ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာ -
ဆိုရှယ်မီဒီယာ feeds တွေကိုညစ်ညမ်းစေတဲ့နေရာအနှံ့ဆိုးကျိုးတွေကိုဖြေရှင်းပြီးအင်တာနက်ပေါ်မှာမှတ်ချက်တွေချဲ့ပါ
Wow …ကမ္ဘာကိုပျော်ရွှင်မှုအနည်းငယ်ပေးဆောင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကော်ပိုရေးရှင်း။ သေချာတာပေါ့၊ ဒါကကုန်အမှတ်တံဆိပ်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုပါ။ သို့သော်၎င်းသည်ဆယ်စုနှစ်များစွာကတည်းက Coke ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မဟာဗျူဟာဖြစ်ခဲ့ပြီးအမှတ်ရစရာကောင်းသည့်နေရာတွင်မြင်နိုင်သည်။ အရမ်းကြောက်တယ်ဟုတ်လား
ကောင်းပြီ, Gawker မှ Adam Pash သည် Adolf Hitler မှ Mein Kampf မှလိုင်းများကိုတွစ်တာနှင့် #MakeItHappy tag ဖြင့်ချိတ်ဆက်ရန်တွစ်တာဘော့တစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းသည်ဟစ်တလာ၏စာသားကိုထုတ်လွှင့်ရန်နှင့်နာရီပေါင်းများစွာ #MakeItHappy tag ဖြင့်ချစ်စရာဓာတ်ပုံများကိုထုတ်လုပ်ရန် Coca-Cola ၏ bot ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Gawker ကတန့်ကိုတင်လိုက်တယ်။ အင်တာနက်ကအရမ်းကြိုက်တယ်။ ကိုကာကိုလာ bot ကိုယူ။
နောက်ထပ်ဘာဖြစ်မလဲ လူမှုမီဒီယာပညာရှင်များကသူတို့၏လူမှုမီဒီယာအမှားများကြောင့်ကိုကာကိုလာကိုတုန်လှုပ်ချောက်ချားစေခဲ့သည်။ သူငယ်ချင်းတွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာသူတို့ရဲ့လူမှုမီဒီယာမဟာဗျူဟာတွေအကြောင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးတာကိုကျွန်မဖတ်တယ်။ #MakeItHappy နှင့် Twitter ကိုရှာဖွေ။ ကျွန်ုပ်ဆိုလိုသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ အလေးအနက်ထား ... သူတို့ကသူတို့ကိုထောင်း။
လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကဆိုရှယ်မီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလောကတွင်တင်ဆက်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုနေရာတွင်စက်မှုလုပ်ငန်း ၀ က်ဘ်ဆိုက်များတွင်ဖော်ပြထားသောအဓိကကော်ပိုရိတ်ဆိုရှယ်မီဒီယာအမှားအယွင်းများကိုငါဖော်ပြပြီးမည်သူမျှကုန်အမှတ်တံဆိပ်အပေါ်ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။ အလေးအနက်ထား - တစ်ခုတည်းမဟုတ်!
ကော်ပိုရေးရှင်းများသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာအမှားအယွင်းများကိုသေလောက်အောင်ကြောက်နေကြသည်။ သူတို့ဘာကြောင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာအမှားတွေကိုကြောက်နေရတာလဲ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုတွင်ရှိသောလူမှုမီဒီယာအတိုင်ပင်ခံများသည်သူတို့၏ ၀ န်ထမ်းများကိုကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချခြင်းနှင့်၎င်းတို့အသုံးပြုသောနည်းဗျူဟာတိုင်းကိုမှားယွင်းစွာအဆုံးသတ်လိုက်ခြင်းကိုခန့်မှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကုမ္ပဏီ၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေသောစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၏ရလဒ်မဟုတ်ပါ၊ လူမှုမီဒီယာအတိုင်ပင်ခံများက၎င်းတို့မှရှုပ်ထွေးမှုကိုရှက်ရွံ့စေရန်ထုတ်လုပ်သည့်သတင်းစာဖြစ်သည်။
ကိုကာကိုလာဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူး မှားသော လေ့လာသူများကတုန့်ပြန်မှုခံထိုက်သောသူတို့၏တွစ်တာ bot လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူ သငျသညျမည်သူမဆိုအလုပ်တာဝန်ချင်တယ်ဆိုရင်, Gawker အလုပ်တာဝန်။ IMO, Adam Pash သည်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုပျော်ရွှင်စွာအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းနှင့် Gawker ကိုဝါကြွားခြင်းအတွက်ဒစ်ခ်ျဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးဟစ်တလာ၏ကိုးကားချက်ကကိုကာကိုလာ၏ Twitter feed တွင်ပြုလုပ်စဉ်သူတို့ကတုန်လှုပ်ချောက်ချားနေသည်။
ဟေး Gawker ... ကြီးပြင်းလာ
သင်ဤကင်လုပ်ခိုင်းနှင့်အတူထိုးစစ်သွားရန်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ သင်၏အမှတ်တံဆိပ်များကိုခုခံကာကွယ်ပါ၊ လူမှုရေးမီဒီယာများယူဆောင်လာသည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်မီဒီယာသို့အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာကြီးသည်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရန်နှင့်သူတို့လုပ်ဆောင်နေသည့်အဖွဲ့အစည်းများအတွင်းကြည့်ရှုရန်သူတို့သုံးစွဲနေသည့်ငွေသည်ကျိုးနပ်ပါသည်ဟုခံစားရစေရန်သူတို့ကြိုးစားနေကြသည်။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့်အတူသို့သော်အန္တရာယ်လာပါတယ်။ သင်အမှားလုပ်မိတော့မည်။ ထိုအဆင်ပြေပါတယ်!
ခင်ဗျားဘယ်လောက်ပဲကြိုးစားပါစေဟစ်တလာကဟစ်တလာနဲ့သင်၏ပျော်ရွှင်သောဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအချို့သောဒစ်ခ်ကိုဟက်လိမ့်မယ်လို့မခန့်မှန်းနိုင်ဘူး။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်းဆိုသည်မှာသင်သည်ဤကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်အားနည်းချက်ရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်၊ သို့သော်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်နည်းဗျူဟာတစ်ခုကိုသင်တီထွင်ခဲ့သကဲ့သို့ကိစ္စရပ်များမှားယွင်းသည့်အချိန်တွင်လည်းမဟာဗျူဟာကိုသင်တည်ဆောက်နိုင်သည်။
Gawker ရဲ့လုပ်ရပ်တွေဟာသူတို့ရဲ့လှုံ့ဆော်ရေးကိုကျော်လွှားဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အပြုအမူဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာကိုပြောခဲ့တဲ့ကိုကာကိုလာကပြည်သူလူထုရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုကျွန်တော်မြင်ချင်ပါတယ်။ မီဒီယာကုမ္ပဏီတခုကအမှတ်တံဆိပ်ကိုအရှက်ရစေဖို့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ကျမှုတွေကြောင့်ငါဝမ်းနည်းမိတယ်။ ငါစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုဖြုတ်ချပြီးလူတွေကို Gawker ရေးဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ပျက်စရာတွေကိုထုတ်ပြောဖို့ပြောလိမ့်မယ်။
ရှိပါတယ် ဆိုရှယ်မီဒီယာအမှားများ ကုမ္ပဏီတွေကရှောင်ရှားနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အင်တာနက်ပေါ်ကလူထုံတွေရဲ့အမျက်ဒေါသကိုမလွတ်မြောက်နိုင်တာကသူတို့ထဲကတခုမဟုတ်ဘူး။
လူမှုမီဒီယာ Pundits ငါ့အကြံဥာဏ်
ဤကဲ့သို့သောအလုပ်မျိုးကိုသင်အမှတ်တံဆိပ်ယူသောအခါသင်၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိုဖျက်ဆီးသည်။ သင်၏ကြောက်ရွံ့မှုနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မည်မျှများပြားလာသည်ကိုကြွေးကြော်ခြင်းသည်သင့်ကိုမကူညီပါ။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကိုစွန့်လွှတ်ရန်နှင့်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ကြွေးကြော်သံများနှင့်တလမ်းတည်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနောက်ကွယ်မှပုန်းရှောင်နေရန်ကုမ္ပဏီများကပိုပိုပြီးမောင်းနှင်နေသည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်အမှတ်တံဆိပ်ကြီးဖြစ်ပါကအွန်လိုင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုရှက်ရွံ့စေရန် bandwagon တွင်ခုန်တက်သည့်လူမှုမီဒီယာအတိုင်ပင်ခံတစ် ဦး နှင့်အလုပ်လုပ်မည်လားကျွန်ုပ်မသေချာပါ။ ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်အကောင်းဆုံးသောကုမ္ပဏီများသည်လူအများနှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်းသည်အဆင်ပြေစေသည်။ ကိစ္စရပ်များမှားသွားသည့်အခါသင်ရေးမည့်လာမည့်ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကြောင့်ခြွင်းချက်တိုင်းကိုဖျောက်ဖျက်ရန်ဘုတ်အဖွဲ့များတွင်ထိုင်ရန်မလိုပါ။ ရပ်ပါ
သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းကိုရပ်တန့်ပါ။ ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်သူတို့၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုမည်သို့ပြောင်းလဲနိုင်မည်၊
Tags: Adam PashကိုကာကိုလာCokeချစ်သူမင်္ဂလာပါလူမှုမီဒီယာအတိုင်ပင်ခံဆိုရှယ်မီဒီယာအမှားများလူမှုမီဒီယာ punditstwitter bot
9:2015 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 9, 55
လုံးဝသင်ဒီမှာသဘောတူသည်။ Gawker သည်လူထည်မဟုတ်သောကိုကာကိုလာဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, Gawker အလုပ်လုပ်တာကသူ့ဟာသူအပြစ်ပေးတာဖြစ်နိုင်တယ်။
9:2015 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 11, 09
ဆောင်းပါးကောင်း ငါဂရပ်ဖစ်ကိုကြိုက်တယ် - ထပ်ဆောင်းအာမခံပစ္စည်းတစ်ခုဟာစာလုံးတစ်လုံးမပါဘဲနဲ့ဆက်သွယ်သင့်တယ်။ Bravo ။
ဆိုရှယ်မီဒီယာရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေထဲကတစ်ခုကစျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ နည်းပညာ၊ ဒီဇိုင်း၊ ကော်ပီရေးတာစသဖြင့်အချိုးကျခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ ယင်း၏နို့စို့အရွယ်အတွက်သတင်းအချက်အလက်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ဆက်သွယ်ရေးအပေါငျးတို့သမတူကွဲပြားဒြပ်စင်။
The Coke စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးသည်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောအစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူအပါအ ၀ င်ဆက်သွယ်ရေးနယ်ပယ်တွင် ဦး ထုပ်များစွာကိုဝတ်ဆင်သူသည်ငါဆိုရှယ်မီဒီယာ၏ ၀ န်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုရင်ဆိုင်သောအခါငါရိုးရှင်းသည့်အချက်တစ်ချက်ကိုသက်သေပြနိုင်သည်။ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအလုပ်။ သူတို့ကိုသင်ဖွင့်လိုက်ပြီ။ ၎င်းသည်ကျည်ဆံစစ်အင်္ကျီမပါဘဲစစ်ပွဲကိုသွားခြင်း၏ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်ညီမျှသည် - သင့်တွင်အဆင့်မြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ရှိပါကထိခိုက်သေဆုံးမှုနှုန်းမြင့်တက်လာလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အင်တာနက်ဖြစ်သည်။ အမည်မသိ၊ ဆီးရီးယားအီလက်ထရွန်နစ်စစ်တပ်၊ Lizard Squad၊ ဟက်ကာအဖွဲ့များသည်ရံဖန်ရံခါကော်ပိုရိတ်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များကိုပစ်မှတ်ထားသည်။ ဤသည်ရုံ Gawker မှာယိုယွင်းဝိညာဉျကိုမှလာမှဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
ပြီးတော့၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ Bill Cosby ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာရှိနေတယ်။ ဝိုး။
သို့သော်၎င်းတို့ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်မီးဖိုချောင်အမှိုက်သရိုက်ထဲမှခွေးတစ်ကောင်ကိုအပြစ်တင်ခြင်းနှင့်ဆင်တူသည်၊ အကယ်၍ သင်ကအဖုံးကိုသေတ္တာထဲကနေချန်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ကံမကောင်းတာကတော့ (ကံမကောင်းတာကငါစိတ်ရင်းမှန်နဲ့ဆိုလိုတာကဒါမဖြစ်သင့်ဘူး၊ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား) ဒါကခင်ဗျားရရှိတဲ့အရာ - ရှုပ်ထွေးမှု။ သို့တိုင်၎င်းသည်အားလုံးပညာရေးဖြစ်သည်။ သင်သည်တစ်စုံတစ်ခု၏သဘောသဘာဝကိုသိပြီးသည့်နောက်အနာဂတ်တွင်၎င်းကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်ကိုပိုမိုနားလည်လာလိမ့်မည်။ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုကျည်ဆံအင်္ကျီ (ဥပစာစကားများကိုရေးဆွဲရန်) နှင့်စည်းရုံးခြင်းနှင့်၎င်းကိုလူတို့နှင့်အတူလှည့်ပတ်ခြင်းကပိုကောင်းသည်။
ဒီချန်နယ်ကစေးကပ်တဲ့ကတ်တယ်။ အဖွင့်စာမျက်နှာကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတစ်ယောက်ယောက်တွင်အမှတ်တံဆိပ်နာမည်နဲ့ဒီဂျစ်တယ်ကျည်ဆံ၊ အင်တာနက်ထိခိုက်မှုနောက်တစ်ခု၊ ဆက်သွယ်ရေးအတွက်သတိထားရမည့်အချက်တစ်ချက်ကိုသင်ချက်ချင်းတွေ့လိမ့်မည်။
Francisco က Nieves
9:2015 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 1, 41 တွင်
ဂရိတ် post! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
9:2015 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 2, 10 တွင်
9:2015 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 5, 00 တွင်
ကောင်းသော post, ငါသည်သင်တို့ကိုဤအနည်းငယ်သာ add ၏ Gawker ကနေအပေါ်အဘယျသို့ကြည့်ရှုရန်စပ်စုမိပါတယ်။
9:2015 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 8, 12 တွင်
Gawker ကမင်းရဲ့သူငယ်ချင်းမဟုတ်တဲ့ shitty brand တစ်ခုလို့ငါထင်တယ်။ 🙂